6 Mitsitsy Tips Train Rehefa Traveling In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 6 Mitsitsy Tips Train Rehefa Traveling In Eoropa
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 24/01/2020)
Indray andro hono, raha ny teti-bola tsy anjara amin'ny fifidianana toerana (na, fara fahakeliny,, tsy toy ny lehibe ny andraikitra!) ireo zavatra mora; tato ho ato, raha te-handeha, tsy maintsy ho marani-tsaina ny fomba hiatrehana ny teti-bola. Na dia nandeha fiaran-dalamby any Eoropa no tena teti-bola-namana safidy ho an'ny olona rehetra izay mitady no mba hiaina ny tena mampientam-po (ary sasatra!) fomba mba handeha, dia mety mbola ho kitapom-batsy-olana toe-javatra tianao Halaviriko ny.
Noho izany, mba hanampiana anao hahazo ny tena avy amin'ny Travel, no atambatra ny lisitr'ireo zavatra mahatsapa fa vola an-tampon'ny fahavaratra toro-hevitra ho an'ny lamasinina mpitety tany Eoropa.
Aza Travel amin'ny Peak Holiday Times
Eny, ity iray ity dia tokony handeha tsy nanao hoe:, nefa tsy misy loza eo amin'ny fampahatsiarovana anareo izany indray mandeha indray. Raha mikasika ny hampiofana mandeha any Eoropa, fety te-Halaviriko ny dia voalohany indrindra Noely, Taona vaovao, sy ny Paka koa ny volana Aogositra. Fa ny antony, ny vidin-javatra skyrocket mandritra ireo volana, izany ... miasa manodidina azy kely.
Na dia tsy nanoro hevitra anareo mba hijery ny faritra Eoropa te-hahita tsara fanahy ny tsy rariny sy lavitra-naka, manao izany isika noho ny tombontsoa. Train mpitety any Eoropa, dia ho hitanao fa ny zavatra rehetra eo amin'ny andrefana no fomba farany lafo kokoa noho ny atsinanana sakana. Noho izany, mandra-kitapom-batsy miha-matevina, lohan'ny Atsinanana sy hijery ny hatsaran'ny dafin'ny Eoropa!
FANAMARIHANA: Rehefa any Eoropa Atsinanana, Ataovy azo antoka ianao hijanona amin'ny Prague (Repoblika Tcheky), Budapest (Hongria), Belgrade (Serbia), Bucharest (Romania), Zagreb sy Split (Kroasia), Sarajevo (Bosnia sy Herzegovina) ary Moscow (Rosia).
Aza 1 Class Rehefa Train Traveling any Eoropa
tsara, mazava ho azy fa! Na izany aza, aza ny iray amin'ireo mpandeha, izay "tsy nahy" mipetraka ao amin'ny 1 kilasy. Nahoana? Satria dia hiafara mandoa lafo tena tsara raha tratra izay hitentina anao mihoatra noho ny 1 kilasy tapakila mihitsy!
Mampiofana ny Overnight Book raha Train Mandeha any Eoropa eo amin'ny firenena
Overnight fiarandalamby, antsoina alina fiarandalamby no tena mahomby vidim-safidy for European mpandeha. Nefa tsy manao anao afa-tsy ny vidiny teo am-pandriana fa mahazo koa ny mahatsapa Eoropa avy amin'ny fomba fijery vaovao rehetra.
tsara, Tsy ara-bakiteny hitsangatsangana fa "stash" ny sakafo avy any an-trano, ka tsy voatery hividy sakafo lafo vidy tao an-tsambo. Ianao, dia hamonjy ny harena raha ho eny an-boay treats tao amin'ny fivarotana lehibe!
Aza Buying Advanced Tickets amin'ny Tanibe ao Shorter dian'i Europe
Rehefa lamasinina mandeha any Eoropa, manantena fohy nandehanany ho lava pricier noho ireo; mbola, misy tombontsoan'ny tsy manana ny boky mialoha izay no hanampy ny manovaova ny dalana sy ny thriftiness izany. Rehefa mandeha ao amin'ny tanibe Eoropa ianao dia afaka mividy tapakila amin'ny toerany teo anatrehan'i niditra ny fiarandalamby.
Vonjeo-A-Train no fomba tsara indrindra au livre toerana mahafinaritra amin'ny mora tahan'ny ary hankafy ny fiaran-dalamby mandeha any Eoropa miaraka amin'ny tapa-tsaina.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-train-traveling-europe%2F%0A%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
europeantravel europetravel soso-kevitra Train Travel traveltips